AMORPHOPHALLUS: SAWIR, DARYEEL GURI, ISTICMAALKA GURIGA, XANNUUN - SOOSAARKA DALAGGA
Amorphophallus waa qalabka hawada ee dabiiciga ah. Marka ubax dhirta laguma talinayo in lagu hayo gudaha. Warshadu waxay kobcisaa qaybinta digriiga.
Xilliga jiilaalka, ubax ayaa lumin kara caleemaha. Dharka ugu sarreeya waxaa laga sameeyaa bartamaha guga dhamaadka xagaaga.
Dheeraad dheeraad ah ee article waxaan ka hadli doonaa ku saabsan amorphophallus dhirta: sawir, daryeelka guriga, guryaha faa'iido iyo cudurrada.
Ka dib iibsashada ubax waxaa loo isticmaali karaa jawiga guriga waqti dheer. Kala wareejinta dhirta si jawi ka duwan ayaa leh xaalad walaac leh.
Ka dib markii aad gadaneyso geedka waa in la geliyaa qolka si fiican u iftiimaya oo aan qorraxdu si toos ah lahayn.
Marka aad guriga joogtid, naqshaduhu waxay si fiican u koraan qaybta hoose ee u dhow balakoonka ama daaqadaha. Waxaa loo dulqaadan karaa dhinaca woqooyiga.
Waraabinta waa inay noqotaa mid joogto ah oo ballaadhan. Warshadu ma dulqaadanayso fatahaada xad dhaafka ah ee biyaha. Qalabka noocan oo kale ah, nidaam dheellitiran oo dheellitiran ayaa laga sameeyaa dhagaxyada ama isku dhejinta. Joogitaanka joogtada ah waxay u horseedaa acidification dhulka iyo jahawareerka xididka. Beer la soo jeediyey si toos ah ubax carrada.
Qalitaan isku mar ah oo la sameeyo sameynta taaj loo beeray waa mamnuuc. Hannaankani wuxuu si xoog leh u wiiqayaa geedka, isagoo hoos u dhigaya koritaankiisa.
Urta Amorphophallus waa mid aad u xoog badan. Dareenka xasaasiyadeed ayaa laga yaabaa inuu ku dhaco dadka qaarkood. Sidaa darteed, marka dhirta ubax laguma talinayo in ay ku jiraan gudaha.
Urka ubaxa ayaa soo jiidata cayayaanka kala duwan ee u duulaya inay u rogrogaan. Cuntada amorphophallus waa mid fiiqan, aan fiicneyn. Noocyada qaarkood waxay u egtahay mid u egtahay kalluunka kaluunka, hilibka ama qashinka.
Awoodaha ayaa u baahan inay doortaan iftiin iyo ballaadhan. Dukaammada suuqyadu waxay iibiyaan dheriyo diyaar ah oo aad ka iibsan kartid ama naftaada samaysan kartid. Si fiican u haboon koobabka jalaatada. Dhalooyinka caaga ah ee la gooyaa qoortooda la'aantiis waa la isticmaali karaa.
Qeybta hoose koobabku waxay u baahan yihiin inay xajiyaan daloolka. Qeybta hoose ee taangiga waxaa lagu dhajiyaa dheecaan, lakabka 2 sentimitir. Vermiculite, dhoobo dhoobo ama qoryaha dhoobada ayaa ku haboon. Caleenta dhirta ah waxay isku dhejisaa dhirta dhirta waxayna ka hortagtaa inay xididada ka soo baxdo.
Soo degidda iyo dib-u-guurista marwalba qaado xilliga gu'ga. Dhirta dhallinyaradu waa kuwo la jaan qaadi karo ilaa 4 jeer sanadkii. Shaybaarkan qaangaarka ah waxaa lagu beddelaa iyadoo taangigu uu ka buuxsamo nidaamka xididka. Adigu ma taaban kartid dhirta 3-5 sano.
Marka xulashada warshad goynta waa in la diido caleemaha dhuuban. Waa lagama maarmaan in Amorphophallus uu leeyahay qadar yar oo caleemo dhicis ah.
Amorphophalus faafin qaybinta digriiga. Nidaamka waxaa lagu fulin karaa guga ama dayrta. Waxaa lagu daaweeyaa fungicides. Dhowr maalmood ka hor taranta, digriiga waa la qoday oo jaray caws.
Nidaamkani wuxuu caawin doonaa kelyaha si sahlan loo garan karo. Digriiga waa in la gaabiyaa ilaa 15 sentimitir. Digriiga yaryar ama digriiga aan loo baahnayn waxaa loo oggol yahay inaysan kala qaybin.
Waa muhiim inay kelyaha ku hayaan laba dhinac. Markaas xaleef ah ayaa la gooyaa oo si fiican loo qalajiyey. Delenki ayaa mar kale la dhaqay waana la kormeeray. Digriiga leh dhibco madow waa inaan loo isticmaalin. Ka dib markaa, waxaa lagu daaweeyaa bakteeriyada iyo fungicides.
Talooyinka waxaa lagu rusheeyaa qalabka waxayna ku hayaan 15 daqiiqadood. Markaas digriiga si fiican u qalajiyey. Ka dib markaa waxay ku habboon yihiin taranta.
Amorphophallus waxaa loola jeedaa dhirta aan qabin. Xilliga jiilaalka, ubax ayaa lumin kara caleemaha. Guga, waxay "u timaadaa nolosha" waana mid fara badan.
Peduncle laga yaabaa inay ka muuqdaan ka hor caleemaha. Qaar ka mid ah tijaabooyinka dhererka ah waxay gaari karaan in ka badan afar ilaa shan mitir.
Xilliga jiilaalka heerkulku waa inuu ahaado mid deggan oo aan dhibic ahayn. Sababtoo ah heerkulka aan xasilloonayn ee ubaxa waxay u muuqan kartaa dhibco madow, caleemaha ayaa dhici doona. Heerkulka ugu fiican waa 12 ° C.
Xagaaga time, ubaxa u dulqaadan heerkul ah 15-25 ° C. Waxaa lagu talinayaa in lagu qaado balkoonka, aqalka dhirta lagu koriyo ama beerta.
Iyadoo muddo dheer ku nool xaalado aan raaxo lahayn baadiyaha, dhirta ayaa dhiman kara.
Waqtiga hurdada ee warshadda waxay la timaadaa dayr gaaban. Muddadan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu yareeyo heerkulka illaa 13 ° C waxayna yareyneysaa waraabinta. Haddii nidaamkan aan la raacin, Amorphophallus wuxuu noqon doonaa mid caajis ah, oo aan dhidid lahayn oo gaaban.
Bacriminta wax soo saarka laga bilaabo bartamaha guga ilaa dhammaadka xagaaga. Nidaamka waxaa la sameeyaa 3-4 maalmood oo kasta.
Bacriminta macdanta ah ee la iibsaday - yaryar, cusbo, nitrogen, fosfate, potash - waxay u fiican yihiin.
Xayawaanka ayaa si fiican uga jawaabaya ubax badan oo ah Bacriminta nafaqada iyo bacarimiso.
Isticmaali karo Bacriminta dareeraha ahkuwaas oo lagu qasi karo biyo. Daadi ubaxa ka foornada leh isku dar ah.
Plant jecel yahay iftiinka iftiinka. Wuxuu jecel yahay marka uu iftiimiyo dhinacyada dhinacyada ubaxa. Uma dulqaadanin qorraxda tooska ah.
Wuxuu diyaariyaa qolal dhalaalaya oo aan lahayn qorraxda tooska ah. Iyadoo la'aanta iftiin, koritaanka dhirta ayaa si tartiib ah hoos u dhacda, afkoda si adag ayaa loo soo saaraa, caleemaha ayaa lumiya midabkooda waxayna bilaabaan inay u burburaan.
Video oo ku saabsan daryeelka dareenka amorphophallus (warshad gudaha ah oo ka timid tropics).
Adiga, waxaan diyaarinnay maqaal ku saabsan raaxada iyo ugu weyn ee nooca noo gaar ah, amorphophallus Titanic iyo violet violet-maroon amorphophallus Cognac.
Amorphophallus waa dabaysha hawada dabiiciga ah. Waxay nadiifisaa hawada sunta waxyeelada leh, burburiso fayraska, staphylococcus iyo bakteeriyada waxyeellada leh.
Ubaxa wuu baabi'in karaa benzenes, phenols iyo formaldehyde. Wuxuu si fudud ula qabsan doonaa gaaska qiiqa. Leaves wuxuu kudhaqaaqaa carbon monoxide.
Goobta lahaanshaha sifooyinka bakteeriyada. Waxay leedahay saameyn cajiib ah dadka ku xanuunsanaya cudurrada wadnaha, mareenka biliary, mindhicirka.
Caleenta ubaxyada waxay uumi saartaa walxaha dabaysha iyo walbahaarka walwalka hawada.
Amorphophallus wuxuu heli karaa kareemka cagaarka ah.
Root kallana saameeyaa xididdada geedka. Waxay noqdaan brown ama burgundy. Cudurku si dhakhso ah lama arki karo. Sidaa darteed, waa la ogol yahay in ay madoobaato afkoda iyo caleemaha. Si loo badbaadiyo dhirta laga bilaabo cudurkan wuxuu kaliya ka saari karaa nidaamka xididka qaba. Si looga hortago cudurkan oo kale, waa in aadan daadin geedka laguna isticmaalin nidaam dheeri ah.
Qamadi ciriiri muuqda qaabka caaryada. Fungus si fudud ayaa ufaraxsan marka dhirta loo rogo dhinaca kale. Marka uu cudurku bilaabo, caleemuhu way madoobaan oo weynaayaan. Sababta cudurkan waa qoyaan aad u sareeya iyo hawo xun oo qolka.
Cayayaanka ayaa dhici kara mealybug. Waxay muujinaysaa qaab isku dhejis ah oo ku yaala caleemaha caleen. Caadi ahaan, buulka cayayaanka noocan oo kale ah wuxuu ku yaalaa xagga hoose ee saxanka caleen. Sababtoo ah dhuudhka caanaha ah, mealybug waxaa loo yaqaan 'apagids' shaggy. Cayayaanka beeraha marka bacda balaadhan ee waaweyn iyo wasakhda. Sidaa darteed, caleemaha geedka waa in la nadiifiyaa.
Amorphophallus wuxuu heli karaa kareemka cagaarka ah. Uma dulqaadanin qorraxda tooska ah. Well waxay ka jawaabtaa ubax badan oo ku saabsan Bacriminta nafaqo iyo bacarimiso. Peduncle waxaa laga yaabaa inuu ka soo baxo caleemaha ka hor.